Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်)
Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Diamicron MRကို ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ အမျိုးအစား ၂ လူနာတွေမှာ သွေးတွင်း သကြားဓါတ် ထိန်းညှိဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ အစားအသောက်ပုံစံပြောင်းခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ချခြင်းတို့နဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ကောင်းစွာမထိန်းညှိနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ အသုံးပြုပါတယ်။ Gliclazide ဟာ မုန့်ချိုအိတ်မှ အင်ဆူလင် ထွက်တဲ့ပမာဏကို များစေပြီး ခန္ဓါကိုယ်မှာ အင်ဆူလင် ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အားပေးပါတယ်။
Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Gliclazide ကိုဖြစ်နိုင်ရင် အစာနဲ့တွဲပြီး သောက်သင့်ပါတယ်။ ဆေးပြားကို အမှုန့်ကြိတ်ခြင်း (သို့) ဝါးစားခြင်းမပြုပဲ ရေနှင့် မျှောချပါ။
Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Diamicron MR ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိုးအောင် နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင် သိမ်းဆည်းတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေ မဖြစ်အောင်လို့ Diamicron MR ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာ သိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ Diamicron MR ဆေးအမျိုးအစားနဲ့ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှု ပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ အကုန်လုံးကို ကလေးတွေ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာ ထားပါ။
Diamicron MR ကို အိမ်သာထဲပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်ကနေ ဆေးကို ပစ်ချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့တဲ့ အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ရဲ့ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Diamicron MR ကို မသောက်သုံးခင် သင့်မှာ အခြားသောရောဂါများ၊ Diamicron MRရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများ (သို့) အခြားသော အရာများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်း (သို့) ကလေးနို့တိုက်နေခြင်း နဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခြားအရေးကြီးတဲ့ အချက်များ ရှိရင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကြိုတင်သတိပေးပါ။
သင့်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များရှိရင် Gliclazide ကိုမသောက်သုံးပါနှင့်။
ဆာလဖာ ဓါတ်ပါသော ဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း (Sulfonylureas-Glyburide (သို့) Sulfamethoxazole-Sulfonamides)
Miconazole မှိုပိုးသတ်ဆေး သောက်နေခြင်း
ကူးစက်ရောဂါရှိခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း (သို့) ခွဲစိတ်ထားခြင်း
အသည်းရောဂါ (သို့) ကျောက်ကပ်ရောဂါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားနေရခြင်း
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ အမျိုးအစား ၁ ရှိခြင်း
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ထိန်း၍မရခြင်း (ဆီးတွင်း ကီတုန်း ketone ပမာဏများနေခြင်း)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်။ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။Diamicron MRသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C အဆင့်ရှိသည် လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်နို့ရည်ထဲ မှာ ဆေးပျော်ဝင်မှုရှိမရှိဆိုတာကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိပါ။ ကလေးနို့တိုက်နေစဉ် Diamicron MRကို သောက်သုံးရင် ကလေးကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ Gliclazide ကို နို့တိုက်မိခင်များ သောက်သုံးရန် မသင့်ပါ။
Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ရင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
သွေးအားနည်းသော လက္ခဏာများပေါ်လာခြင်း (ဥပမာ – မူးဝေခြင်း၊ ဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြစ်ခြင်း၊ အလွန်နှုံးချိနေခြင်း (သို့) အသက်ရှုမောလာခြင်း)
သွေးယိုစိမ့်သော လက္ခဏာများပေါ်လာခြင်း (ဥပမာ – ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ ဖူးရောင်ခြင်း၊ ဆီးတွင်သွေးပါခြင်း၊ သလိပ်ထဲတွင် သွေးပါခြင်း၊ သွားဖုံးသွေးယိုခြင်း)
စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ ရှိခြင်း ( ဥပမာ – အာရုံစိုက်မှု လျှော့နည်းခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် ပြောင်းလဲခြင်း၊ အိပ်စက်ချိန် (သို့) ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေလိုသည့် အတွေးများ ရှိခြင်း)
အသည်းရောဂါလက္ခဏာများ ရှိခြင်း (ဥပမာ – ပျို့တက်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်း၊ အရေပြားနှင့် မျက်ဖြူသားများ ဝါခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း)
အမှတ်မထင် ကိုယ်အလေးချိန် တက်ခြင်း
သွေးတွင်းသကြားဓါတ်နည်းသော လက္ခဏာများ ပေါ်လာခြင်း (ချွေးစီးပြန်ခြင်း၊ အသားအရေဖျော့ပြီး အေးစက်လာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်လာခြင်း၊ နှုံးချိခြင်း၊ အသားတုန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ဗလုံးဗထွေးနှင့် စကားပြောခြင်း)
ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ခဏခဏ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ခြင်း (ချမ်းတုန်၍ ဖျားခြင်း၊ အလွန်အမင်း ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း၊ ကြာရှည်စွာ မူးဝေခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်တောင့်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်း (သို့) နှုံးခွေခြင်း)
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ရင် သောက်လက်စ Diamicron MRကို ရပ်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသပါ။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း (သို့) ရင်ဘတ်အဖိထားခံရသလို ခံစားရခြင်း (သို့) မောခြင်း
ဓါတ်မတည့်သောလက္ခဏာများ ပေါ်လာခြင်း (ဥပမာ – ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း၊ ပျို့တက်ခြင်း၊ အန်ခြင်း (သို့) မျက်နှာနှင့် လည်ပင်း ရောင်ရမ်းခြင်း)
အရေပြားပေါ်တွင် ဆိုးရွားသော ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်ခြင်း (ဥပမာ – အရည်ကြည်ဖုထွက်ခြင်း၊ အရေပြားကွာကျခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့အနီကွက် အလျင်အမြန်ထွက်၍ ဖျားနာခြင်း)
ဘယ်ဆေးတွေက Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Diamicron MR ဟာ သင်အခု လောလောဆယ်ဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားသောဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မလိုးလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားပဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Diamicron MR က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင် ဆေးမသောက်မီကတည်းက အစားအသောက် (သို့) အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေ ရှိမရှိကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Diamicron MRဟာ သင့်ရဲ့နဂို ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများဟာ ဆေးနဲ့သက်ရောက် ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာများ ရှိခြင်း
Glucose-6-phosphate dehydrogenase(G6PD) ဓါတ် ချို့တဲ့ခြင်း
ဖျားနာခြင်း (သို့) စိတ်ဖိစီးမှုရှိခြင်း
ရောဂါပိုမို ဆိုးရွားသွားခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အများဆုံးသုံးလေ့ရှိတဲ့ ဆေးအချိုးအစားကတော့ စစချင်းမှာ ၃၀ မီလီဂရမ်ကို နေ့စဉ် အချိန်မှန်မှန် သောက်ရပါမယ်။ ၂ ပတ် ပြည့်တိုင်း သင့်ရဲ့ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကျဆင်းနှုန်းပေါ် မူတည်ပြီး နေ့စဉ် အများဆုံး ၁၂၀ မီလီဂရမ်ထိ တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Diamicron MRကို နံနက်စားချိန်မှာ သောက်သုံးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Diamicron (ဒိုင်ရာမိုင်ခရွန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Diamicron MR ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံ အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြားပုံစံ ပြင်းအား ၃၀ မီလီဂရမ်
ဆေးပြားပုံစံ ပြင်းအား ၆၀ မီလီဂရမ်
ဆေးပြားပုံစံ ပြင်းအား ၈၀ မီလီဂရမ်
Diamicron MRကို သောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမယ့် အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Diamicron 80mg (Gliclazide) –generic. http://www.procanadadrugs.com/diamicron-80mg- gliclazide-generic.html. Accessed October 27, 2016
Diamicron MR. http://www.medbroadcast.com/Drug/GetDrug/Diamicron-MR. Accessed October 27,2016
ဆီးချို နောက်ဆက်တွဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ – ဆီးချိုကြောင့် စိတ်သောကဖြစ်ခြင်း